Aluminium Alloy Ingots များ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Aluminium Alloy Ingots များ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ Aluminium Alloy Ingots များ, အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်အရာ။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတောအတွင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအသင်းများထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်တို့ထက်သာလွန်ထုတ်ကုန်သေချာထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - Al-ADC12
လူမီနီယမ် ingot ADC12
Cast aluminium alloy ingots များသည်အရည်ပျော်မှတ်နိမ့်သောလက္ခဏာများရှိသည်,ကြီးမားသောအပူစွမ်းရည်,နှင့်ခံနိုင်ရည်အားကောင်းသည်.မကြာမီနှစ်များအတွင်းက,ဆိပ်ကမ်းဆည်တည်ဆောက်ရေး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်-ချေးစီမံကိန်းများ,ဆန့်ကျင်-corrosion aluminium anode ingots များသည် anti များအတွက်အထူးပစ္စည်းများဖြစ်လာသည်-ချေးစီမံကိန်းများ.ဖြည့်စွက်ကာ,အလူမီနီယမ်အလွိုင်းများကိုလည်းအခြားအမှိုများနှင့်အပိုပစ္စည်းများ၏သတ္တုများပုံသွန်းရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်;အပန်းဖြေအားကစားနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများသည်သံမဏိသတ္တုများနှင့်ပလတ်စတစ်များမှပေါ့ပါးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်အရပေါ့ပါးပြီးလှပသောလူမီနီယံသတ္တုစပ်များသို့တဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။.
အလေးချိန်:၆-တစ်လုံးလျှင် ၇ ကီလိုဂရမ်
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်): %,အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
Si Fe မောင် Mn Zn
9.5-12.5 1.အများဆုံး ၁ ခု. 0.6 အများဆုံး. 0.5 အများဆုံး. 1.4 အများဆုံး.
ဒေါ် Sn Pb ပြေတီ ဦး အယ်လ်၊
0.5 အများဆုံး. 0.4 အများဆုံး. 0.အများဆုံး ၁ ခု. 0.2 အများဆုံး. Rem.
ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-၁၀၀ ရရှိပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်%ငွေပေးချေမှု
ငွေပေးချေမှု:၁၀၀%တီ/T order မှာယူမှုလက်ခံရရှိသည်.
အထုပ်:သစ်သား pallet (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/aluminium-alloy-ingots.html
အကောင်းဆုံး Aluminium Alloy Ingots များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Aluminium Alloy Ingots များ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ